Banyere Michael Jackson
Popularly maara dị ka "Eze nke Pop" Michael Jackson bụ heartthrob nke music ofufe niile gafee n'ụwa. Mụrụ 29th nke August, 1958 na Gary Indiana, ka African American ezinụlọ, Michael Joseph Jackson bụ 8th nke 10 ụmụ. Nne ya Katherine Esther Scruse bụ a devout Onyeàmà Jehova na nna ya Joseph Walter "Joe" Jackson bụ onye bụbu oku okpu na a nchara ọrụ na US Steel.
Dị ka a 5 afọ nwa, Michael Jackson rụrụ dị ka a ụzọ vocalist nke Jackson ezinụlọ Motown ìgwè. The ụmụnne Jackson ghọrọ ìgwè so na kpụrụ Jackson 5. Ke mbụ frasi iji nweta ezi-eso Jackson 5-egwuri Obodo gigs na ọbụna dekọrọ otu otu "Big Boy" na "Ị Gbanwere" na b-n'akụkụ, nke bụ adịghị ike mmasị ọha na eze ukwuu. Ọzọkwa on Jackson 5 na-arụ ọrụ na-emeghe Ọrụ maka Sam na Dave, Gladys Knight na Pips na ndị ọzọ. N'afọ 1968, Berry Gordy bịanyere aka Jackson 5 n'ihi na ya labeelu. Mgbe e mesịrị na ha kwagara Los Angeles na wepụtara mbụ ha album "Diana Ross awade Jackson 5" nke see December chaatị dị iche iche nke afọ ahụ. Mbụ ha otu "Achọrọ m ka ị Back" bụ ọnụ ọgụgụ otu hit na billboard Hot 100 chaatị na January 1970 nke sochiri ọzọ kpọrọ na topped chaatị dị ka "Aga m anọ ebe", "ABC", "Ịhụnanya ahụ I Save "na ndị ọzọ.
Na ndị ya na-arụ ọrụ na Jackson 5, Michael Jackson malitere ya solo ọrụ na afọ nke 13 na n'afọ 1971 ọ see chaatị dị iche iche na "wee na-E" na otu aha album. N'afọ 1972, akpa solo nọmba 1 nke Jackson bụ eponymous ballad banyere a oke si album Ben. Ọ bụ na n'oge n'afo 1980. na Michael Jackson-aghọ onye a ma ama aha na-ewu ewu music. E nwere ọtụtụ ndị videos nke songs dị ka "Uda Ọ", "thriller", "Billie Jean" na ndị ọzọ na nke mebiri na agbụrụ mgbochi na mekwara ka dịtụ ọhụrụ MTV ama. Ofụri 1990s, Michael Jackson maara na-agaa leta solo artists nakwa innovated na videos dị ka mkpu. Moonwalk na robot agba egwú usoro site Jackson n'ihu mere ya na-ewu ewu n'etiti ndị mmadụ.
The 1982 "thriller" bụ kasị mma n'ire album nke Michael Jackson mgbe ụfọdụ nke ya ndị ọzọ na-ewu ewu album agụnye kwụsịrị Wall, History, Bad na ize ndụ.
1. ụfọdụ banyere Michael Jackson
2. Top 10 Albums nke Michael Jackson ka Download
3. Top 20 music video nke Micheal Jackson
4. Top 20 Songs nke Michael Jackson ka Download
5. Download music free na TunesGo si internet
Ụfọdụ banyere Michael Jackson
Michael Jackson bụ onye nke nnọọ ole na ole artists onye e edeba aha ya n'usuu na Rock na Roll Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha ugboro abụọ
Ọ bụ ya bụ akpa nakwa dị ka nanị egwú si n'oké nkume na pop music onye e esịne ke Songwriters Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha na Dance Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha
Ọ natara multiple Guinness Book Records, Grammy ndụ nweta Award, 13 Grammy Awards, Grammy Akụkọ Mgbe Ochie Award, 26 American Music Awards, na Artists nke Century, 13 nọmba otu kpọrọ na US na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe e mere atụmatụ ahịa nke Michael Jackson bụ na gburugburu 400 ọtụtụ nde gafee ụwa
Michael Jackson bụ ihe kasị ọdịda ndekọ artists na-ewu ewu music akụkọ ihe mere eme
Ọ bụ nke mbụ artists ka nwere ndị na top 10 otu na billboard Hot 100 na 5 dị iche iche ọtụtụ iri afọ
N'afọ 2000, Guinness World Records nyere ya ude akwado 39 charities.
Ke August 1994, Michael Jackson mara ọkwa na ọ lụrụ di na nwunye na akara ngosi naa Presley ada Lisa Marie Presley ma alụmdi na nwunye ha dị mkpirikpi biri ndụ dị ka ha gbara alụkwaghịm na 1996. Mgbe e mesịrị na na 1996 ọ lụrụ Debbie Rowe bụ onye a nurse na nwere ụmụ abụọ na ya site wuru insemination. N'afọ 1997, Ọkpara Michael Joseph "Onyeisi" Jackson Obere mụrụ mgbe n'afọ 1998, nwa Paris Michael Katherine Jackson mụrụ. N'afọ 1999 Rowe na Michael Jackson nwekwara gbara alụkwaghịm na-eji nke ụmụ. Michael Jackson ga-ekwu okwu banyere ya nwa nke atọ site na aha Prince Michael "blanket" Jackson II bụ onye ya na onye na-amaghị surrogate.
Ọtụtụ esemokwu na-mmasị na ndụ nke Michael Jackson. Ke ufọt ufọt nke afọ 1990 ọ nọ na-ebo ebubo nke nwa n'ụzọ mmekọahụ ma ikpe e mesịrị biri nke ikpe. N'afọ 2005 ọ nọ na-ọzọ tọhapụwo nke nwa mmekọahụ n'ụzọ na ndị ọzọ na ebubo. On 14 nke June 2005, enye acquitted niile ebubo, ma mgbe ahụ aha ya tara ahụhụ a Lọt na ego nwetara a isi hit. The iwu ego nke Michael Jackson bụ otú elu na ọ dịghị ụlọ akụ itule o siri ike nwere ego ọbụna na-agba ya mkpa mmefu.
Ọ na-akwadebe maka ya comeback egwu usoro nke e akpọ ka "Nke a Bụ ya" na n'oge a ọ nwụrụ n'elu 25th nke June 2009 na afọ nke 50 ruru gbasara obi njide mgbe nnukwu propofol na benzodiazepine mmenaanya. Ọnwụ ya chịrị a na-egbu ọchụ site Los Angeles County Coroner na Cornad Murray bụ onye ya onwe ya physican e na ikpe nke ịsụ mmadụ. Dum music ụwa na Fans ẹtua ya ọnwụ mberede.
Top 10 Albums nke Michael Jackson
1 Thriller Download Link
2 Ize ndụ Download Link
3 Bad Download Link
4 History: n'Oge Gara Aga, ugbu a na Future, Book m Download Link
5 Anwụ anwụ Download Link
6 Off The Wall Download Link
7 Ọbara ahụ na Dance Floow Download Link
8 Eze nke Pop Download Link
9 The Mkpa Michael Jackson Download Link
10 Wee na-e Download Link
Top 20 music video nke Micheal Jackson
2 Bad Download Link
3 Nwere ike ị na-eche ya Download Link
4 Chịa Download Link
5 Ezigbo onye ohi Download Link
6 Oké Nkume Site Ị Download Link
7 Kụọ ya Download Link
8 Hapụ m aka Download Link
9 Nwa ma ọ bụ White Download Link
10 Kedu onye ọ bụ Download Link
11 Adịghị akwụsị 'Til Ị Get Enough Download Link
12 Billie Jean Download Link
13 Ekwu Kwuru Kwuru Download Link
14 Ha adịghị eche Banyere Anyị Download Link
15 Captain eo Download Link
16 Man n'enyo Download Link
17 Ọ bụ nke ndụ m Download Link
18 Cheta The Time Download Link
19 Ke kaboodu Download Link
20 Hour Download Link
Top 20 Songs nke Michael Jackson
1 Billie Jean Download Link
2 Adịghị akwụsị 'Til ị na-ezu Download Link
3 Thriller Download Link
4 Man n'enyo Download Link
5 Kụọ ya Download Link
6 Oké Nkume Na ị Download Link
7 Ịgwọ The World Download Link
8 Ị nọghị sọ gị Download Link
9 Ị ga-anọ Download Link
10 Cheta The Time Download Link
11 The Way ị na-eme m obi Download Link
12 Earth Song Download Link
13 Bad Download Link
14 Ekwu Kwuru Kwuru Download Link
15 Black na White Download Link
16 Wanna Ka Malite Ihe Download Link
17 Ezigbo onye ohi Download Link
18 Ị nkume My ụwa Download Link
19 Chịa Download Link
20 Unyi Diana Download Link
Top 10 Adobe Premiere Aha Templates
Apụghị Play AVI Files na Xbox 360? Ngwọta
Olee otú Tinye SRT ka DVD
> Resource> Video> Ihe Michael Jackson na Top 10 Albums nke Michael Jackson